रूपन्देहीका चारसहित थप १० संक्रमितको मृत्यु – Naya Kura Daily
रूपन्देहीका चारसहित थप १० संक्रमितको मृत्यु
October 11, 2020 151
काठमाडौँ- कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट रुपन्देहीका चारसहित थप १० संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा रूपन्देहीका ४, सुनसरीका र बाँकेका २/२ तथा चितवन र काभ्रेमा एक/एक जना छन् ।
बुटवल–११ का ८४ वर्षीय संक्रमित वृद्धको अस्पताल लैजादै गर्दा मृत्यु भएको छ । बुटवलमा आईसीयू बेड नभएपछि जिल्ला बाहिरका अस्पताल लैजाने क्रममा कपिलवस्तुको धानखोलामा मृत्यु भएको कोरोना विशेष अस्पताल वुटवलका सूचना अधिकारी डा.विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।
यस्तै बुटवल ११ की ६१ वर्षीया वृद्धाको उपचारको क्रममा कोरोना विशेष अस्पताल बुटवलमा आइतबार बिहान २ बजे मृत्यु भएको छ ।असोज २१ गतेदेखि आईसीयूमा राखेर उपचाररत उनमा श्वासप्रश्वासको समस्या ठीन नहुँदा मृत्यु भएको डा. गौतमले बताए ।
बुटवल–१ का ७० वर्षीय वृद्धको पनि शनिबार राति १० बजे कोरोना विशेष अस्पताल वुटवलमै मृत्यु भएको छ ।
असोज २२ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी शनिबार नै अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई निमोनिया भएको डा. गौतमले बताए ।
यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका–३ का ६६ वर्षीया वृद्धाको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ । उनको शनिबार दाङको बेलुझण्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल मृत्यु भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचाररत दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।
अस्पतालका व्यवस्थापक नारायण दाहालका अनुसार मृतक दुबै सुनसरीका हुन् । शनिबार राति हरिनगर गाँउपालिका ४ का ७१ वर्षीय वृद्ध र दुहबी ३ की ४० वर्षीया महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको दाहालले जानकारी दिए ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएसँगै असोज २१ गते ७१ वर्षीय वृद्धलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो ।
फोक्सो सम्बन्धी समस्या भएका उनको शनिबार राति १०:१५ बजे मृत्यु भएको उनले बताए ।
यस्तै सुनसरीको दुहबी ३ की महिलाको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । असोज २० गते अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको पनि कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । उनको शनिबार राति ११ बजे मृत्यु भएको दाहालले जानकारी दिए ।
बाँकेमा पनि दुई संक्रमितको मृत्यु
बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत थप दुई सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– १० ट्राफिक चोकका ८४ वर्षीय वृद्ध र कोहलपुर नगरपालिका- ८ निवासी ७१ वर्षीया वृद्धाको शनिबार राति मृत्यु भएको हो ।
बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालको कोरोना आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत वृद्धको शनिबार राति ९:५५ बजे मृत्यु भएको हो । त्यसको पाँच मिनेटको अन्तरमा १० बजे महिलाको मृत्यु भएको थियो ।
श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा पुरुषमा गत असोज ६ गते र महिलामा १४ गते कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
दुवै जनालाई भेरी अस्पतालको कोरोना आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरेर रोगको प्रकृतिअनुसार सबै प्रकारको आवश्यक उपचार गरिए पनि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएको थिएन ।
योसँगै बाँके जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २६ पुगेको छ । बाहिरी जिल्लाबाट उपचारको क्रममा बाँकेमा आई मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १२ पुगेको छ ।
बाँकेको भेरी अस्पतालमा उपचाररत आठ जना र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका १२ गरी २० संक्रमित सिकिस्त अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
चितवनमा पनि थप एक जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ निवासी ७५ वर्षीया वृद्धाको चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको हो ।
दम, उच्च रक्तचाप र निमोनियासम्बन्धि समस्या भई असोज २२ गते अस्पताल भर्ना भएकी उनको असोज २३ गते पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
अस्पतालको कोभिड सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भईरहेको समयमा आइतबार बिहान उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । योसँगै जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३३ पुगेको छ ।
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा उपचाररत एक पुरूषको पनि पुरुषको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको छ ।
धुलिखेल अस्पतालमा १० दिनदेखि भर्ना भएका ५२ वर्षीय पुरुषको शनिबार राति मृत्यु भएको काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले जानकारी दिए ।
Nextकोरोना समाप्त होस् भन्दै विशेष पूजा पशुपतिमा; ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् पशुपतिनाथ ले रक्षा गर्नेछन्!
भगवान कृष्णले सिकाएका १० सफलताका सुत्र